Ihowuliseyili Ixabiso eliphantsi leFilimu iTonela eGreenhouse Tent kunye neGreenhouse | Uloyiso
Ixabiso eliphantsi le-PE Film Tunnel yezolimo
Amacandelo angama-800-999 Amacandelo e-1000-1999
> = 2000 Iziqwenga
Esi sigqumathelo sigubungele ngokupheleleyo ukufuma kunye nokugcina ubushushu obuphezulu, okunokukunceda ukhule iintlobo ezahlukeneyo zezityalo.
1) ifreyim yocingo olwenziweyo, ukugqwala kunye nokuxhatshazwa.
2) Ifilimu ye-PE engabonakaliyo
Igama lebrand Uloyiso
Inombolo yomzekelo WS-GH1
FOB Izibuko Shanghai, Ningbo
Igama lomxholo Ixabiso eliphantsi le-PE Film Tunnel yezolimo
Ubungakanani beMveliso 500 * 60 * 40CM
Izinto zokumboza Ifilimu ye-PE
Isakhelo spec. Dia 2.6 * 0.8mm ucingo kwalenza
Ukupakisha iibhokisi Ivale Standard ibhokisi
MOQ Iziqwenga ezingama-800
Kukunceda ukuba ukhule iintlobo ngeentlobo zezityalo ezinokuthi zingafumaneki kwindawo ohlala kuyo ngokusebenzisa indawo eshushu, efumileyo ekhuthaza ukukhula kwamaxesha afudumeleyo kunye nezityalo zemozulu. Dibanisa zonke izityalo zakho kwindawo enye, ekhuselweyo ekunceda ukuba Ukukhula nokulawula izityalo unyaka wonke kwaye ukhusele iziqhamo, imifuno, kunye neentyatyambo kwizinto ezinobungozi. Uyilo lweTonnel lwenza kube lula kwaye kube lula ukukhathalela nokulawula isixa esikhulu sezityalo.
Umyezo ngaphambi kokuqala kwentwasahlobo! Le ngubo ifudumeza umhlaba kwaye iyazikhusela kwimozulu embi, izilwanyana, kunye nezinambuzane Itonela yenza umqobo opheleleyo, ukugcina ubushushu kunye nokufuma ukugcina izityalo zakho zisempilweni kwaye zonwabile
Yenziwe nge-UV ehlala i-UV ezinzileyo, i-polyethylene engama-150 yemithwalo enzima, le tonela yomelele kwaye yomelele.Ihops zentsimbi eziqinisiweyo zinobungqina bokuba ngumhlwa kwaye zingena ngokulula emhlabeni ukuze zikhusele itonela kwindawo yazo.
Ngoyilo lobunikazi, uyilo olunye lwesiqwenga, i-Easy Tunnel Cloche iyakhawuleza ukuseta kunye nokusebenziseka lula Vula nje itonela njengekhodiyoni kwaye uyisonge ngokucocekileyo emva kokuyisebenzisa Ukungena kwigadi yakho kwangoko yimpepho!
Egqithileyo Ingxowa enkulu yeKrisimesi yoMgangatho oPhakamileyo ePhakamileyo
Okulandelayo: I-3-tier Walk-in kwi-mini greenhouse yePVC yendlu yegadi eluhlaza
Indawo zokugcina iiGreen-Span
Itonela Greenhouse For Sale 10'x7'x7 ...
Itonela elimhlophe lePlastiki lePhepha le-8x3x2m
Itonela lePlastiki leGreen House yeZolimo 6x3x2m